Masiixu waa halkan! , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Mid ka mid sheekooyinka aan jeclahay wuxuu ka yimid qoraaga caanka ah ee reer Russia Leo Tolstoy. Wuxuu wax ka qoray nin carmal ah oo carmal ah oo magaciisa la yiraahdo Martin kaasoo hal habeen ku riyooday inuu Masiixu booqanayo aqoon-isweydaarsiga maalinta xigta. Martin aad buu u naxay oo wuxuu damcay inuu hubiyo inuusan noqon sida Farrisigii oo ku guuldaraystay inuu salaamo Ciise albaabka. Sidaas ayuu kacay waagii ka hor, oo maraq kariyey, oo wuxuu bilaabay inuu si taxaddar leh u fiiriyo waddada intuu shaqadiisa qabanayo. Wuxuu doonayay inuu diyaar ahaado markuu Ciise yimid.
Waxyar ka dib markii ay soo baxday qorraxda, wuxuu arkay askar howlgab ah oo baraf jilciya. Markii halyeeygii hore uu mashiinka jiifiyey si uu u nasto oo uu u kululaado, Martin wuxuu u dareemay naxariis iyo wuxuu ku casuumay inuu ag fadhiisto foornada oo uu cabbo shaah kulul. Martin wuxuu askariga uga warramay riyadii uu ku riyooday xalay iyo sidii uu ugu farxay markii la aqriyay injiillada dhimashadii wiilkiisii ​​yaraa ka dib. Ka dib dhowr koob oo shaah ah iyo ka dib markii uu maqlay sheekooyin badan oo ku saabsan naxariista Ciise ee dadka ku jira noloshooda ugu hooseysa, wuxuu ka tagay aqoon-isweydaarsiga wuxuuna uga mahadceliyay Martin kobcinta jirkiisa iyo naftiisa.
Goor dambe oo aroortii ah, haweeney si xun u lebisan ayaa istaagtay aqoon isweydaarsiga horteeda si ay si wanaagsan ugu xirxirto cunugeeda ooyaya. Martin bannaanka ayuu u baxay wuxuuna ku casuumay haweeneyda inay u soo gasho si ay ilmaha ugu daryeesho foornada diiran. Markuu ogaaday inaysan haysan wax ay cunaan, wuxuu siiyey maraq uu diyaariyey, oo ay weheliyaan jaakad iyo lacag shaashad ah.
Galabta, haweeney lugayneysa oo lugo lugeyneysa ayaa istaagtay iyadoo tufaaxeedii ka haray ay ku haysatey dariiqa. Waxay qaadday joonyad culus oo xiiran oo alwaax ku xidhan. Markay miisaameysey dambiil dusheeda si ay ugu duudduubto garbihiisa kale, wiil qaba koofiyad cufan ayaa qabtay tufaax oo waxay isku dayeen inay cararaan. Haweeneydu way qabatay, waxay isku dayday inay u yeerato oo ay u jiido booliska, laakiin Martin wuu ka orday aqoon isweydaarsigiisii ​​wuxuuna ka codsaday inay cafiyo wiilka. Markay naagtu mudaaharaadday, waxay xusuusisay maahmaahdii Ciise ee addoonkii, kaasoo sayidkiisu u dhaafay deyn weyn, laakiin ka tagtay oo kii uu ku lahaa deynta ku qabtay. Wiilkii wuu ka raali galiyay. Waa inaan cafinaa qof walba, gaar ahaan kuwa aan fikirka laheyn, ayuu yiri Martin. Waa laga yaabaa, haweeneydu inay ka cawday wiilashan dhallinta yar ee mar horeba si xun wax u dhacay. Markaa annaga ayay na saaran tahay, waayeellada, inaan si wanaagsan wax u barinno, Martin ayaa ku jawaabay. Naagtiina way ogolaatay oo waxay bilowday inay kahadasho ayeeyadeeda. Kolkaasay eegtay xumaanfalayaashii waxayna tidhi: Eebbe ha la raaco. Markay soo qaadatay boorsadeeda inay guriga aado, wiilkii ayaa horay usii orday oo yidhi, "Maya, ina keena." Martin wuxuu daawaday iyagoo lugeynaya wadada kadibna shaqada ku laabtay. Markiiba way madoobaatay, sidaa darteed ayuu laambad shiday, qalabkiisiina dhinac u dhigay oo nadiifiyay aqoon isweydaarsiga. Markuu u fadhiistay inuu akhristo Axdiga Cusub, wuxuu arkay muuqaalo gees gees madow ah iyo cod leh “Martin, Martin, miyaanad garanaynin?” “Yaad tahay?” Ayuu weydiyay Martin.
Waa aniga, codku codbaahiyay, bal eeg, waa aniga. Askarigii hore wuu ka soo kacay geeska. Wuu dhoolla caddeeyay ka dibna wuu baxay.
Waa aniga, codkii mar kale buu u dhawaaqay. Naagtii iyo cunugeedii ayaa ka soo baxay isla gees. Way qosleen oo way baxeen.
Waa aniga! Codkii ayaa dib u dhawaaqay, iyo odaygii iyo wiilkii xaday tufaaxa ayaa ka soo baxay geeska. Way dhoola cadeeyeen oo waa la waayey sida kuwa kale.
Martin aad ayuu u farxay. Wuxuu la fadhiistay Axdigiisii ​​cusbaa, oo isagu iskiis u furay. Wuxuu kor ka akhriyey bogga sare:
Sababta oo ah waan gaajooday oo cuntad baad i siisay. Waan harraadsanaa oo waxaad i siisay wax aan cabbo. Waxaan ahay mid qariib ah waadna i soo gelaysay. ")" Wixii aad ku sameysay mid ka mid ah walaalahayga ugu yar, waad igu yeeshay. " (Matayos 25,35 iyo 40).
Runtii, waa maxay Masiixi ka badan in naxariis iyo roonaan loo sameeyo kuwa nagu hareeraysan? Sida Ciise inoo jeclaaday oo uu isu soo dhiibay, isaguna wuxuu inoogu soo jiiday Ruuxa Quduuska ah farxaddiisa iyo jacaylka noloshiisa ee Aabaha wuxuuna ina siinayaa awood aan ku wadaagno jacaylkiisa dadka kale.